China 340g yenkukhu enkonkxiweyo Isidlo sasemini Ukwenziwa kwenyama kunye neFactory | HUIQUAN
1. Izithako: Inkukhu, isitatshi, isosi yesoya, iswekile, ityuwa, ioli yemifuno esulungekisiweyo,Iziqholo.
2. Ukupakisha: Ipakethe yeTin: Ileyibhile yephepha letoti; Itoti eprintiweyo
Inkukhu,Isitatshi,Isosi yeSoya,Iswekile,Ityuwa,Ioli yemifuno esulungekisiweyo,Iziqholo.
Inkukhu ikhethwayo. Inyama yenkukhu ithambile kwaye inencasa emnandi, ineprotheyini eninzi, inokwetyisa okuphezulu, kwaye ifunxwa lula kwaye isetyenziswe ngumzimba womntu.
Ukukhethwa kwezinto eziphathekayo kuyamangalisa, ngokukodwa inyama yenkukhu yenkukhu, umgangatho wenyama ulawulwa ngokungqongqo, iinkozo zenyama zibonakala ngokucacileyo, kwaye umnyango ugcwele inyama, i-mellow kodwa ingenawo amafutha.
Ababoneleli abakhethwe ngokungqongqo banalo lonke ikhonkco loshishino lweenkukhu, ukusuka ekufuyweni kwezityalo kunye nemveliso yokutya ukuya kwimfuyo, ukuxhela kunye nokulungiswa, okugubungela zonke ikhonkco ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokulandeleka komgangatho wemveliso.
Nokuba yi "sandwich" okanye "i-hamburger" yesidlo sakusasa, inyama yesidlo sasemini kunye ne-noodles ekhawulezileyo, okanye inyama yesidlo sasemini ephekwe ngembiza eshushu, imanzisa umlomo. Nditsho nesitya se-noodles esicacileyo, emva kokubeka izilayi ezi-2, ngokukhawuleza yenza abantu banomdla wokutya! Ngayo, unokusombulula ngokulula ingxaki yokutya ekhaya nasemsebenzini.
Ngaphambili: I-Curry yenkomo yenkomo enkonkxiweyo Ukutya okuKhawuleza
Okulandelayo: Inkukhu yeCurry enkonkxiweyo ilula kwaye ikutya ngokukhawuleza
Inkukhu yeCurry enkonkxiweyo ilula kwaye ikutya ngokukhawuleza
Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo, Inyama yehagu enkonkxiweyo, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inkukhu enkonkxiweyo, I-Canning Beef Brisket,